छापाः सागको बजेटबाट मन्त्रीहरुलाई दौरा सुरुवाल, बलात्कारी बाबा पक्राउ, श्रीमतीको शव छाडेर श्रीमान गायव | Makalukhabar.com
छापाः सागको बजेटबाट मन्त्रीहरुलाई दौरा सुरुवाल, बलात्कारी बाबा पक्राउ, श्रीमतीको शव छाडेर श्रीमान गायव
मंसिर १७, काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित अधिकांश पत्रत्रिकाले १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताकै विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । मंसिर १५ गतेबाट काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा सञ्चालन भइरहेको सागका विभिन्न प्रतियोगिताका समाचारलाई आज प्रकाशित पत्रपत्रिकाले प्राथमिकता दिएका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यवस्था, बलात्कारका आरोपित सिद्धबाबा कृष्णदास पक्राउ, मंसिर १४ को उपनिर्वाचनको समाचारले पनि प्राथमिकता पाएका छन् ।
आज कान्तिपुर दैनिकले प्रथम पृष्ठमा सागमा नेपालले प्राप्त गरेको स्वर्ण पदकको विषय शिर्ष समाचार बनाएको छ । ‘दुई÷दुई स्वर्णको कथा’ शिर्षक दिइएको छ । भने, नेपालीहरुको उत्तर भ्रमण अर्थात चीन तर्फको भ्रमणमा जाने नेपालीहरुको संख्या बढ्दै गएको समाचार पनि छ । कान्तिपुरको अग्रपृष्ठमा छाउगोठमा निसासिएर महिलाको मृत्यु भएको विषयले स्थान पाएको छ ।
नागरिक दैनिकले ‘नेपालको दमदार सुरुवात’ शिर्षकमा सागकै समाचार बनाएको छ । उपनिर्वाचनको विषयलाई पनि स्थान दिएको छ भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो अस्पतालबाट आफ्नो स्वास्थ्यवस्थाका बारेमा दिएको अभिब्यक्तिलाई पनि प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ । यसका साथै बलात्कारको आरोपमा चतराबाट सिद्धबाबा पक्राउको समाचार पनि छ ।
यता अन्नपूर्ण पोस्टले पनि सागकै समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘नेपाललाई १५ स्वर्ण’ शिर्षकमा मुख्य समाचार बनाइएको छ । राजधानी दैनिकले सागको समाचारसँगै उपनिर्वाचनको अन्तिम परिणामको विश्लेषण गरिएको छ । साथमा अस्पतालमा गर्भवती श्रीमतीलाई उपचार गर्दा गर्दै रकम अभावका कारण अस्पतालमै मृत्यु भएपछि श्रीमान गायब भएको समाचार पनि छ ।
नयाँपत्रिकाले भने १३ औं सागको बजेटबाट मन्त्रीहरु र पदाधिकारीले दौरासुरुवाल सिलाएको समाचार प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार सागको बजेट दुरुपयोग भएको छ ।
नयाँ पत्रिका लेख्छ, गृहमन्त्रीलाई मात्र होइन, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मालगायत ४० जना भिआइपीले सित्तैमा दौरा–सुरुवाल पाएका छन । सागका लागि विनियोजित बजेटबाट उनीहरूले छालाको कालो जुत्ता, मोजा र टोपीसम्म पाएका छन । तर, दुर्भाग्य ! नेपाली खेलाडीले दौरा–सुरुवालमा मार्चपास्ट गर्ने भनिएकोमा क्रिकेट खेलाडीका लागि दौरा–सुरुवाल सिलाउन नभ्याइएको भन्दै उनीहरूलाई ट्र्याक–सुटमै हिँडाइएको थियो । खेलकुदको पैसा दुरुपयोग भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दौरा–सुरुवाल अस्वीकार गरेका छन ।
उनले सागको नाममा भएको खर्च विवरण हेरेर अनियमिततालाई अस्वीकार गर्न अर्थका अधिकारीहरूसँग संक्षिप्त अनौपचारिक छलफल पनि गरेका छन । आयोजना र व्यवस्थापनका लागि सरकारले पौने चार अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकमबाट नेपालसहित दक्षिण एसियाका सात राष्ट्रका खेलाडी, प्रशिक्षक, प्राविधिक र प्रतिनिधि गरी झन्डै ६ हजार सहभागीको नेपाल बसाइ व्यवस्थापन हुनेछ । यही रकमबाट नेपाली खेलाडीको तयारी पनि गर्नुपर्नेछ । तर, आर्थिक रूपले पनि आफ्नो पोसाक आपैmं व्यवस्था गर्न सक्ने विशिष्ट व्यक्तिहरूले खेलकुदका लागि आएको रकमबाट एक–एक जोर कपडा जोडेका छन् ।
हेर्नुहोस आजका पत्रपत्रिकाका प्रथम पृष्ठ
एकै पटक बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मुल्य
प्रहरीभित्र हुने खेतीमा हेडक्वाटरबाटै ठूल्ठूला अफिसर सक्रिय, को–को लाग्या छन् सबै थाहा छः आईजीपी खनाल
मंसिर २५, काठमाडौँ । प्रहरीमा चल्ने खेती पनि कस्ता हुन थाले भने, एउटापछि अर्को गर्दै ‘आईजीपी हट्दैछन्’ भनेर हल्ला गराउने । यसका लागि हेडक्वाटरभित्रैबाट ठूल्ठूला अफिसर सक्रिय भएको भनी आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले केही दिनअघि पिसीसी बैठकमै भने – को–को लाग्या छन्, सबै थाहा छ ।’बजारमा अब प्रहरीबारे आउने लाग... जारी राख्नुहोस...
नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग खन्ने काम चैतपछि मात्रै
मंसिर २५, काठमाडौं । नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजनाको सुरुङमार्ग निर्माण आगामी चैतपछि मात्रै सुरु हुने भएको छ । ५ दशमलव ७ किलोमिटर को उक्त आयोजनामा सडक, पहुँचमार्ग, पुल, भवनलगायत संरचना निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएपनि २ दशमलव ६८ किमी सुरुङमार्ग निर्माण भने आगामी चैतपछि मात्रै हुने भएको हो ।सुरुङमा... जारी राख्नुहोस...
नेकपाले उपसभामुखलाई राजिनामा दिन लगाउने, को बन्ला सभामुख ?
मंसिर २५, काठमाडौँ । नेकपाले संसद्को हिउँदे अधिवेशनअगावै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउने भएको छ। पुस ४ मा सुरु हुने अधिवेशनको अध्यक्षता राजपाका नेता एवं जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले गर्नेछन्।संसद् नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य सभामुखले गर्छन्। उनी नहुँ... जारी राख्नुहोस...
संसदभित्रै यौनहिंसा, इज्जतको डरले सहन बाध्य
मंसिर २५, काठमाडौं । यौनहिंसा भनेको के हो ? कसरी हुन्छ ? हिंसामा परेका महिलाले कसरी व्यक्त गर्ने ? कोसँग, कहाँ गएर हिंसामा परे भनेर गुहार्ने ? यी प्रश्नको जवाफ छ ?’गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पुष्पा केसी भण्डारीले तेस्र्याएका प्रश्न हुन् यी । उनले संसदभित्रै आफूहरुमाथि यौनहिंसा भएको बताइन् । भनिन्,‘पुरुष... जारी राख्नुहोस...
तेह्रौं साग सम्पन्न, नेपाललाई अहिलेसम्मकै सर्वाधिक उपलब्धि
मंसिर २५, काठमाडौं । तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता मिलेको छ । नेपालले ५१ स्वर्णसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ। सन् १९९९ मा आठौं सागमा ३१ स्वर्ण जितेको नेपालले त्यसपछि हात पारेको यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक उपलब्धि हो । २०२१ मा पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुने १४औैं सागमा भेट्... जारी राख्नुहोस...
छापाः इतिहास रच्दै सकियो साग, आयोजना अस्तव्यस्त, खेलाडीको प्रदर्शन उत्कृष्ट, बालुवाटारको जग्गा किन्नेविरुद्ध मुद्दा लाग्ने, अनुदान सवा करोड, उपलब्धि शून्य
मंसिर २५, काठमाडौं । राजधानी काठमाडौँबाट प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले फरक फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । तर अधिकांश पत्रपत्रिकाले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगितासँग सम्बन्धित समाचार भने सबैजसो पत्रिकाले महत्वका साथ प्रकाशन गरेका छन् ।गोरखा पत्रले ‘ऐतिहासिक बन्यो १३औँ स... जारी राख्नुहोस...
नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या वार्ताबाटै समाधान
मंसिर २४, काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले नेपाल र भारतबीच देखिएको सीमा विवाद छलफलबाट समाधान निकाल्न सकिने बताएका छन् । राजदूतको जिम्मेवारीबाट अवकाश लिने क्रममा रहेका राजदूत पुरीले एक विशेष अन्र्तवार्तामा सो कुरा बताएका थिए । नक्सा विवादका विषयमा उनले भने– त्यो नक्सा भारत भित्... जारी राख्नुहोस...
६३५ मेगावाटको दूधकोसी आयोजना बन्ने
मंसिर २४, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवदेन डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि सक्रियता बढाएको आयोजनाले जनाएको छ ।खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमा क्षेत्र र भुँवाघाटदेखि डेढ किलोमिटर तल द... जारी राख्नुहोस...
२७ वर्षदेखि ४ सन्तान एउटै झुप्रोमा नांगै खेलिरहेका छन् !
मंसिर २४, काठमाडौं । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–७ स्थित चुहाडे बजारदेखि १ किलोमिटर परको दुरीमा एउटा झुप्रो घर भेटिन्छ । एउटा मात्र कोठा रहेको घरभित्र तीनवटा ढुंगा गाडेर बनाएको अगेनो, एकछेउमा भार पकाउने कसुडी, छेउमा दुईवटा खाट जोडेर बनाएको ओछ्यान छ ।बाहिरबाट ढोकाको चुकुल लागेको छ, भित्र चार दाजुभाई... जारी राख्नुहोस...
जलपरि गौरिकाले बनाइन् ४ स्वर्णको कीर्ति, नेकपा बल्ल जुर्मुरायो, दूतावासको लापरबाहीका कारण २१ नेपाली कामदार कालोसूचीमा
मंसिर २४, काठमाडौँ । राजधानी काठमाडौँबाट प्रकाशित अधिकांश पत्रपत्रिकाहरुले नेपालमा जारी १३ औं सागसँगै अन्य विषयहरुलाई पहिलो पृष्ठको मुख्य समाचार बनाएका छन् । आज अन्नपूर्ण पोष्टले गौरिकाले बनाइन् ४ स्वर्णको कीर्तिको विषयलाई पहिलो पृष्ठको मुख्य समाचार बनाएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार १३औं दक्षिण एस... जारी राख्नुहोस...